သင်အသက်ကြီးနေပြီး ဖြစ်ကြောင်း သင်ကို အသိပေးနေတဲ့ အချက် (၅)ချက် - CeleLove
သင်အသက်ကြီးနေပြီး ဖြစ်ကြောင်း သင်ကို အသိပေးနေတဲ့ အချက် (၅)ချက်
June 11, 2019 Cele Love ဗဟုသုတများ 0
လူတွေက ကိုယ့်ကိုယ်ကို အသက်ကြီးလာမှန်းကို မေ့နေတတ်ကြပါတယ်။ အသက်ကြီးလာလေ ကိုယ့်အသက်ကို မှတ်ထားရမှာ ကြောက်လေပါ။ ဒါပေမယ့် သင်အသက်ကြီးနေပြီဆိုတာ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်က အမြဲသတိပေးနေပါတယ်။ ဥပမာ သူငယ်ချင်းတွေ မင်္ဂဆောင် ၊ ကလေးမွေးသွားတာမျိုး ၊ ကလပ်တွေ သွားရတာ မကြိုက်တော့တာမျိုး တွေပါပဲ …. ။
(၁) မြူးကြွတဲ့ သီချင်းသံတွေကို နားမထောင်နိုင်တော့တာမျိူး
သင့်ကိုယ်သင် အသက်ကြီးနေပြီးလို့ အသိပေးနေတာကတော့ မြူးကြွတဲ့ သီချင်းသံတွေကို လုံးဝနားမထောင်နိုင်တော့တာပါပဲ။ ဒါက သင်အသက်ကြီးပြီးဆိုတာ ပြောပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ မြူးကြွတဲ့ သီချင်းသံတွေကြားရင် နားငြီးလာတာမျိုး ၊ မုန်းလာတာမျိုးဖြစ်တာက သင်ကို အသိပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်နော် …. ။
(၂) အဟောင်းက အသစ်ထက်ပိုကောင်းတယ်လို့ တွေးမိနေတာမျိုး
ဇာတ်ကားဟောင်းတွေကမှ အသစ်တွေထက် ပိုကောင်းတယ်လို့ တွေးနေတာက အသက်ကြီးနေပြီးဆိုတာ အသိပေးနေပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ အသစ်တွေ ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း အဟောင်းကို မမှီဘူးဆိုတာ ပိုသိလာတာက အသက်ကြီးပြီး ရင့်ကျက်လာတဲ့ သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ် …. ။
(၃) ပါတီ ၊ ကလပ် ၊ ဘားတွေကို မကြိုက်တော့တာမျိုး
ညသန်းခေါင်ထိ ပါတီတွေ ပေး ၊ ကလပ်သွား ၊ ဘားသွား တာတွေကို မကြိုက်တာဟာ သင်အသက်ကြီးနေပြီးဆိုတာကို အသိပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အသက်ရလာရင် ငယ်တုန်းကလုပ်ခဲ့တာတွေကို မကြိုက်တော့ဘဲ ပျင်းစရာကောင်းတယ်လို့ ထင်လာတတ်ကြပါတယ်။ စိတ်တည်ငြိမ်နေတဲ့ အရွယ်ကို ရောက်သွားလို့ဖြစ်ပါတယ် …. ။
အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ဝင်ငွေ ကိုယ်ရှာလာရတဲ့အတွက် ပိုက်ဆံအကြောင်းကို ပိုသိလာပါတယ်။ ပိုက်ဆံရှာရတာ ခက်ကြောင်းသိလာလေ သင့်က အသက်ကြီးလာသူဖြစ်လေပါ။ ဒီအချက်က သင်ကိုယ်သင် အသက်ကြီးနေပြီဆိုတာကို ပြချင်နေတဲ့အချက်ပါပဲ …. ။
(၅) သင့်သူငယ်ချင်းတွေ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေကြတာမျိုး
တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်ဘာသာ အပျော်လွန်နေရင် ကိုယ့်အသက်ကြီးလာတာကို မေ့နေတတ်ကြပါတယ်။ ဘယ်လောက်ထိတောင် အသက်ကြီးလာမှန်း မေ့နေလဲဆိုရင် ဘေးပတ်ဝန်းကျင် သူငယ်ချင်းတွေတောင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့အထိ မေ့နေတတ်ကြပါတယ်။ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်က သင်ဘယ်အသက်အရွယ်ရောက်နေပြီးဆိုတာကို အသိပေးနေတာဖြစ်ပါတယ် …. ။
သငျအသကျကွီးနပွေီး ဖွဈကွောငျး သငျကို အသိပေးနတေဲ့ အခကျြ (၅)ခကျြ
လူတှကေ ကိုယျ့ကိုယျကို အသကျကွီးလာမှနျးကို မနေ့တေတျကွပါတယျ။ အသကျကွီးလာလေ ကိုယျ့အသကျကို မှတျထားရမှာ ကွောကျလပေါ။ ဒါပမေယျ့ သငျအသကျကွီးနပွေီဆိုတာ သငျ့ပတျဝနျးကငျြက အမွဲသတိပေးနပေါတယျ။ ဥပမာ သူငယျခငျြးတှေ မင်ျဂဆောငျ ၊ ကလေးမှေးသှားတာမြိုး ၊ ကလပျတှေ သှားရတာ မကွိုကျတော့တာမြိုး တှပေါပဲ …. ။
(၁) မွူးကွှတဲ့ သီခငျြးသံတှကေို နားမထောငျနိုငျတော့တာမြိူး
သငျ့ကိုယျသငျ အသကျကွီးနပွေီးလို့ အသိပေးနတောကတော့ မွူးကွှတဲ့ သီခငျြးသံတှကေို လုံးဝနားမထောငျနိုငျတော့တာပါပဲ။ ဒါက သငျအသကျကွီးပွီးဆိုတာ ပွောပွနတောဖွဈပါတယျ။ မွူးကွှတဲ့ သီခငျြးသံတှကွေားရငျ နားငွီးလာတာမြိုး ၊ မုနျးလာတာမြိုးဖွဈတာက သငျကို အသိပေးနတော ဖွဈပါတယျနျော …. ။
(၂) အဟောငျးက အသဈထကျပိုကောငျးတယျလို့ တှေးမိနတောမြိုး
ဇာတျကားဟောငျးတှကေမှ အသဈတှထေကျ ပိုကောငျးတယျလို့ တှေးနတောက အသကျကွီးနပွေီးဆိုတာ အသိပေးနပေါတယျ။ အကွောငျးကတော့ အသဈတှေ ဘယျလောကျကောငျးကောငျး အဟောငျးကို မမှီဘူးဆိုတာ ပိုသိလာတာက အသကျကွီးပွီး ရငျ့ကကျြလာတဲ့ သဘောမြိုးဖွဈပါတယျ …. ။
(၃) ပါတီ ၊ ကလပျ ၊ ဘားတှကေို မကွိုကျတော့တာမြိုး
ညသနျးခေါငျထိ ပါတီတှေ ပေး ၊ ကလပျသှား ၊ ဘားသှား တာတှကေို မကွိုကျတာဟာ သငျအသကျကွီးနပွေီးဆိုတာကို အသိပေးနတောဖွဈပါတယျ။ အသကျရလာရငျ ငယျတုနျးကလုပျခဲ့တာတှကေို မကွိုကျတော့ဘဲ ပငျြးစရာကောငျးတယျလို့ ထငျလာတတျကွပါတယျ။ စိတျတညျငွိမျနတေဲ့ အရှယျကို ရောကျသှားလို့ဖွဈပါတယျ …. ။
အသကျကွီးလာတဲ့အခါမှာ ကိုယျ့ဝငျငှေ ကိုယျရှာလာရတဲ့အတှကျ ပိုကျဆံအကွောငျးကို ပိုသိလာပါတယျ။ ပိုကျဆံရှာရတာ ခကျကွောငျးသိလာလေ သငျ့က အသကျကွီးလာသူဖွဈလပေါ။ ဒီအခကျြက သငျကိုယျသငျ အသကျကွီးနပွေီဆိုတာကို ပွခငျြနတေဲ့အခကျြပါပဲ …. ။
(၅) သငျ့သူငယျခငျြးတှေ ကိုယျဝနျဆောငျနကွေတာမြိုး
တဈခါတဈလေ ကိုယျ့ဘာသာ အပြျောလှနျနရေငျ ကိုယျ့အသကျကွီးလာတာကို မနေ့တေတျကွပါတယျ။ ဘယျလောကျထိတောငျ အသကျကွီးလာမှနျး မနေ့လေဲဆိုရငျ ဘေးပတျဝနျးကငျြ သူငယျခငျြးတှတေောငျ ကိုယျဝနျဆောငျတဲ့အထိ မနေ့တေတျကွပါတယျ။ ဘေးပတျဝနျးကငျြက သငျဘယျအသကျအရှယျရောကျနပွေီးဆိုတာကို အသိပေးနတောဖွဈပါတယျ …. ။
ရှားစောင်းလက်ပပ်ကိုသုံးပြီး တစ်ပတ်အတွင်း ဝိတ်ချနည်း (၃) နည်း